त्रुटि कोडेक खोल्ने सोनी भेगास 13: साधारण तरिका कसरी मिलाउने
धेरै भिडियो सम्पादन काम गर्ने प्रयोगकर्ताहरू, यस्तो समस्या सामना हुन सक्छ: को कोडेक सोनी भेगास 13 कसरी अब यसलाई समाधान गर्न खोल्दा एउटा त्रुटि प्राप्त गर्न वस्तुहरु थप्दा को impossibility को रिपोर्ट र यो देखाइनेछ। तपाईं कम्तिमा दुई विकल्प प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
त्रुटि कोडेक खोल्ने सोनी भेगास 13 (Windows 8, 10, 7): साधारण विधि तय
त्रुटि को प्रकृति बारेमा न्यायाधीश भने, यो समस्या केही कारण लागि, कोडेक नै काम गर्न छोड्यो या बस स्थापना गरिएको छ के बाहिर आंकडा गाह्रो छैन। तसर्थ, सरल मामला मा, यो स्थापना गर्न आवश्यक छ।
पहिलो निर्णय, त्रुटि खोल्ने कोडेक सोनी भेगास 13, एक विशेष अनलाइन संसाधन जहाँ तपाईं ओएस को एक विशिष्ट संस्करण लागि डिजाइन कोडेकहरू को पूर्ण प्याकेज डाउनलोड गर्न सक्छन् मा जारी गरिनेछ गर्दा हुन्छ भने।
स्थापना फाइल डाउनलोड गर्दा, यो प्रशासक विशेषाधिकार साथ चलाउन हुनुपर्छ। कम्प्युटर मा स्थापना प्रक्रिया विदेशी मलबे को एक एकदम धेरै स्थापित गर्न सकिन्छ रूपमा तर तुरुन्तै स्थापना जारी राख्न हतार छैन (उदाहरणका लागि, पासवर्ड बक्स र बकवास को धेरै को लागि)। तसर्थ, स्थापना विधि चयन विन्डो, तपाईं विस्तृत स्थापना (विस्तृत स्थापना) को एक स्ट्रिङ प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
त्यसपछि बस लाइसेन्स सम्झौता गर्न सहमत र जारी गर्न बटन क्लिक गर्नुहोस्। कि मौलिक परिवर्तन जो सक्दैन केहि र बस आवेदन मापदण्डहरु को बटन डबल-क्लिक थप सेटिङहरू, बनाउन आग्रह गरिने पछि (लागू)। कि पछि, यो सफल स्थापना बारेमा एउटा सन्देश देखाइनेछ। यसलाई केही भयो थियो भने कार्यक्रम र काम सुरु गर्न मात्र रहनेछ।
कोडेक खोल्ने सोनी भेगास 13 त्रुटि: वैकल्पिक कोडेक प्याक
अर्को विधि पनि कोडेकहरू को स्थापना संग सम्बन्धित छ। कार्यक्रम निरन्तर कोडेक सोनी भेगास 13 खोल्ने गर्दा एउटा त्रुटि देखापर्यो भन्ने रिपोर्ट छ भने, तपाईंले सबै अवसरका लागि वैकल्पिक र सायद सबैभन्दा बहुमुखी प्याकेज डाउनलोड गर्न सक्छन्।
यो कोडेकहरू K-लाइट को एक सेट छ। मूल, मानक र पूर्ण (तपाईं जस्तै कि हो) - तीन विकल्प वैकल्पिक प्याकेज प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि मामला मा, यो प्याकेज यसलाई आफूलाई कोडेकहरू बीच संघर्ष को मामला मा प्रयोगकर्ता समस्या सिर्जना गर्न मा छैन र थप "प्रकाश" र काम छ, र प्रणाली संसाधन को मामला मा सबै अरूबाट बाहिर खडा।
निस्सन्देह, यो थप कोडेकहरू को स्थापना सम्पूर्ण अनुपयुक्त हुन सक्छ अक्सर किनभने, काम आवश्यक छ कि प्याकेज संस्करण छनौट गर्दा विचार गरेर निर्देशित गर्नुपर्छ। तर यो प्याकेज नै आफ्नो हार्ड ड्राइभमा न्यूनतम स्मृति ठाउँ ओगटेको रूपमा, एउटा समस्या छैन, तर तपाईंले केही अवस्थामा पूर्ण परिमार्जन चयन गर्दा यसलाई अन्य कार्यक्रम पनि केही कागजातनगरिएकोत्रुटि सुविधाहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न सम्भव छ।
र, पाठ्यक्रम, यदि तपाईं प्रयास गर्नुहोस्, एउटै इन्टरनेट मा तपाईं अझै पनि कुनै पनि तहमा कोडेकहरू र decoders संग प्याकेजहरू को एक विशाल संख्या पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तथापि, सबै डाउनलोड र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ बीचमा यी दुई विकल्प सबैभन्दा उपयुक्त देखिन्छ। तर, आफ्नो आवश्यकता आधारमा, तपाईं अत्यधिक दिशात्मक र प्रयोगकर्ता आवश्यकता को विशेष सम्बन्धित केही चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
के प्रयोग गर्ने?
जो प्याकेज रुचि गर्न? सिद्धान्त मा, दुवै सेट राम्रो, किनभने हल्का र स्थिरता को, यो दोस्रो विकल्प प्राथमिकता दिन राम्रो छ हो तर। खैर, तपाईं थप स्थापना विकल्प प्रयोग गर्न दोस्रो प्याकेज स्थापना भने, यो सजिला मा भविष्यमा, उदाहरणका लागि, मिडिया को अन्य प्रकार काम गर्न आउनेछ। उदाहरणका लागि, अडियो ट्रयाक को वाहेक संग भिडियो सम्पादन कार्यक्रममा यस्तो कोडेकहरू हामी आवश्यक के फिट। र यो अन्य आवेदन कुरा होईन वा भिडियो र अडियो प्ले। र सामान्य मा कुनै व्यावसायिक लागि सबै भन्दा राम्रो उपकरण बस त्यहाँ छैन त, विशेष चालक ASIO को सिस्टम मा एकीकरण गणना छैन, ध्वनि काम गर्न।
तर, अझै पनि भिडियो सम्पादन वा अडियो को मूल कुराहरू mastering छन् जो साईट प्रयोगकर्ताहरूको लागि, यस्तो प्याकेज स्टक मा पर्छ-छ। समान भिडियो को नयाँ ढाँचाको एउटा प्लेब्याक सबै छलफल छैन। सबै पक्षहरूमा हेर्छ कारण यसको चरम बहुमुखी गर्न K-लाइट धेरै बेहतर: तसर्थ, निष्कर्षमा unambiguous गर्न सकिन्छ।
को छडी भाइरस कसरी जाँच गर्ने? विस्तृत विश्लेषण
Omniboxes - हटाउन कसरी? समस्या निवारण गाइड
Vasiliy Vasilevich Davydov - विकासात्मक शिक्षा को सिद्धान्त को लेखक
सार्वजनिक सम्बन्ध विशेषज्ञ - कार्यहरु र कार्यहरू
घरेलु नीति वा CJSC "आरएफ"
इसाबेल लुकास - अष्ट्रेलिया एउटा रोचक अभिनेत्री
मित्रतालाई मुख्य कुरा हो - क्षमा
कम्बोडिया छुट्टी - शानदार र अविस्मरणीय
"Loofah" रंग (Dufa): प्रकार, सुविधाहरू, समीक्षा